साग : पुरुष फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपाल, पौडीमा गौरिकाको नयाँ कीर्तिमान
२०७२ माघ २६ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाल एक खेल अगावै भारतमा जारी दक्षिण एसियाली खेलकुद ‘साग’ पुरुष फुटबलकाे सेमिफाइनलमा पुगेको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह ‘बी’ काे खेलमा मंगलबार भुटान र बंगलादेशले १–१ को बराबरी खेलेपछि नेपाललाई फाइदा पुगेको हो । समूहको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई ५–० को फराकिलो अन्तरले हराएको थियो । समूह ‘डी’मा रहेको नेपाल तीन अंकसँगै शीर्ष स्थानमा छ । भुटान र बंगलादेशको एक–एक अंक छ । बिहीबार समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले बंगलादेशसं ... बाँकी अंश»
प्रेम तामाङको सशक्त प्रर्दशनबीच पराजित भयो नेपाल
२०७२ माघ २६ मंगलबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल पाकिस्तानसंग पराजित भएको छ । नेपालका लागि प्रेम तामाङले उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरेपनि हार टरेन । तामाङले १ छक्का ११ चौकाको मद्दतले अविजित ६५ रन बनाए । फतुल्ताह स्थित खान शाहेब ओस्मान अलि स्टेडियममा भएको प्ले अफ सेमिफाइनलमा नेपाल पाकिस्तानसंग १ सय २२ रनले पराजित भयो । टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछी पाकिस्तानले पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै २ सय ५८ रनको विशाल यो ... बाँकी अंश»
सागमा नेपालको पदक बढ्दै, गौरिकालाई अर्को कास्य
२०७२ माघ २५ सोमबार, काठमाडौं । नेपालको पदक तालिकामा पौडीबाट गौरिका सिंहले अर्को पदक थपेकी छन् । १२औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालको लागि पदक जोड्ने क्रममा उनले १०० मिटर ब्याकस्ट्रोकमा १ मिनट ०७.३१ सेकेन्डका साथ कास्य पदक प्राप्त गरिन् । गौरिकाको यस प्रतियोगितामा ब्यक्तिगत दोश्रो पदक जितेकी हुन् । उनले २०० मिटर ब्याकस्ट्रोकमा समेत कास्य पदक प्राप्त गरेकी थिइ्न् । भारतले १ मिनट ०३.७८ सेकेन्डमा साथ स्वर्ण र दोश्रो स्थानमा रहेको श्रीलङकाले उक्त दुरी १ मिनट ०६.०० सेकेन ... बाँकी अंश»
डेब्यू खेल खेलेकै राष्ट्रविरुद्ध ‘अन्तिम’ जित निकाल्दै विदा भए म्याक्कुलम
२०७२ माघ २५ सोमबार, एजेन्सी । अष्ट्रेलियाविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा न्यूजिल्याण्ड ५५ रनले विजयी भएको छ । यो जितसंगै तीन खेलको एक दिवसीय श्रृंखला न्यूजिल्याण्डले २–१ ले कब्जा गरेको छ । अष्ट्रेलियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले व्याटिङ गरेको घरेलु टोली ४५.३ ओभर खेल्दै २ सय ४६ रन बनाएर अलआउट भयो । न्यूजिल्याण्डका लागि ओपनर मार्टिन गुप्टिलले ५९, ग्रान्ट इलिओटले ५० तथा आफ्नो अन्तिम एकदिवसीय खेलेका कप्तान ब्रेन्डन म्याक्कुलमले आक्रमक ४७ रनक ... बाँकी अंश»
१८ गर्लफ्रेण्डका धनी फुटबल स्टार नेमार
२०७२ माघ २५ सोमबार, एजेन्सी। ब्राजीलका स्टार स्ट्राइकर नेमार पटक पटक चर्चामा छाउने गरेका छन् । उनी आफ्नो 'अफेयर'लाई लिएर चर्चामा आउने गरेका छन् । ब्राजीली मोडल तथा एक्ट्रेस ब्रूना मारक्यूजिनसँग उनको 'ब्रेकअप' भएपछि उनि फेरि अफेयरमा रहेका छन् ।'ब्रेकअप' भएको खुलासा १९ वर्षयी ब्रूनाले सामाजिक सज्जाल मार्फत गरेकी थिइन् । ब्राजील र बार्सिलोना क्लबका स्टार फोरवर्ड नेमार विगत दुर्इ वर्षमा दोस्रो पटक आफ्नो प्रेमिका ब्रूना मारक्यूजिनसँग टाडा भएका हुन् ... बाँकी अंश»
साग : निमाले दिलाइन् नेपाललाई पहिलो स्वर्ण, नेपालकाे पदक संख्या ११
२०७२ माघ २५ सोमबार, काठमाडौं । भारतको गुवाहाटी र सिलोङ्गमा जारी १२ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले पहिलो स्वर्ण पदक हासिल गरेको छ । प्रतियोगिता सुरु भएको चौथो दिन नेपालले स्वर्ण पदक जितेको हो । नेपालका लागि उसु तर्फको नान्ताओउतर्फ निमा घर्तिमगरले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएकी हुन् । आइतबार भएको पहिलो चरणमा उनले ८.४५ र सोमबार भएको दोस्रो चरणमा ८.४६ गरी कुल १६.९१ अंकसहित स्वर्ण जितेकी हुन् । रुकुम घर भएकी निमा ललितपुरको ग्वार्कोमा बस्दै आएकी छन् । उनी डनबस ... बाँकी अंश»
बार्सिलोनामा सुआरेज र रियालमा करिम बेन्जेमा चम्किए
२०७२ माघ २५ सोमबार, एजेन्सी । स्पेनिश लिग ला लिगा फुटबलमा शीर्ष क्लब बार्सिलोना र रियाल मड्रिड विजयी भएका छन् । आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले लेभान्तेलाई २–० ले हरायो । बार्सालाई विजयी गराउन डेभिड नाभारो र लुइस सुआरेजले एक–एक गोल गरे । दबाबमा रहेको लेभान्तेका चार खेलाडीले पहेंलो कार्ड पाए । यस्तै, रियाल मड्रिडले ग्रनाडाविरुद्ध २–१ को संघर्षपूर्ण जित निकाल्यो । रियाललाई विजयी गराउन करिम बेन्जेमा र लुका मोड्रिचले गोल गरे । ग्रनाडाका युसेफ अल अरबीले एक गोल फ ... बाँकी अंश»
प्रिमियर लिग : आर्सनल जित्यो, चेल्सी र म्यानयु रोकिए
२०७२ माघ २५ सोमबार, एजेन्सी । इङ्गलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सनल विजयी भएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा आर्सनले एएफसी बर्नमाउथलाई २–० ले हरायो । आर्सनललाई विजयी गराउन मेसुत ओजिल र एलेक्स ओक्लेड एक–एक गोल गरे । अर्को खेलमा शीर्ष क्लब चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड १–१ बराबरीमा रोकिए । सुरुवातमा म्यानयुले जेस लिंगार्डको गोलबाट अग्रता लियो । यद्यपि, अन्तिम समयमा चेल्सीका डिएगो कोष्टाले गोल फर्काएपछि खेल १–१ को बराबरीमा सकियो । लिगमा २५ खेलबाट ५३ अंक जोडेक ... बाँकी अंश»
रोचक बन्दै प्रिमियर लिग, शीर्ष क्लब पछारिए, लेस्टर अग्रस्थानमा
२०७२ माघ २४ आइतबार, एजेन्सी । इङ्गलिश प्रिमियर लिग फुटबल रोचक बन्दै गएको छ । लिगमा शीर्ष क्लबहरु पछारिएका छन् । शनिबार राति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई हराँउदै लेस्टर सिटीले लिगको अंक तालिकामा अग्रता लिएको छ । म्यान्चेस्टर सिटीको मैदानमा भएको खेलमा ३–१ ले विजयी भयो । लेस्टरलाई विजयी गराउन रोबर्ट हुथले दुई तथा रियाद माहारेजले एक गोल गरे । सिटीका सर्जियो अगुएरोले एक गोल फर्काए । यस्तै, टोटनह्याम हट्सपरले वाट्फोर्डलाई १–० ले हराउँदै लिग तालिकाको दोस्रो स्थानम ... बाँकी अंश»
अपाङ्गता भएकाले खेले बास्केटबल
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्ज्योरी खेलकुद सङ्घले विश्व अपाङ्गता खेलकुद दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको बास्केटबलमा अपाङ्गता भएका मानिसले धेरै दर्शकलाई आकर्षित गरे । पाँच पाँच जनाको समूह बनाएर स्थानीय सिफलचौरमा खेलाइएको उक्त कार्यक्रममा उनीहरुको एकापसमा भएको सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा हेर्नलायकको थियो । कार्यक्रममा ६० जनाले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका–७का प्रशासकीय अधिकृत कुमारी रा ... बाँकी अंश»
आइपिएलका लागि ९ करोडमा बिके अष्ट्रेलियन अलराउण्डर वाट्सन
२०७२ माघ २३ शनिबार, मुम्बई । आइपिएलको नवौं संस्करणका लागि बैङ्लोरमा भएको खेलाडी लिलाम विक्रीमा अष्ट्रेलियाका अलराउण्डर शेन वाट्सनलाई रोयल च्यालेञ्जर्स बैंङ्लोरले ९ दशमलब ५ करोड रुपैंयाँको सर्वाधिक महंगो मूल्यमा खरिद गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा महंगो खेलाडी बनेका भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहलाई यसवर्ष सनराईज हैदराबादले सात करोड रुपैंयाँमा किन्यो । दक्षिण अफ्रिकाका अलराउण्डर खेलाडी क्रिस मौरिसलाई दिल्ली डेयरविल्सले ७ करोडमा किन्यो । उनको न्यूनतम मूल्य ५० लाख र ... बाँकी अंश»
दक्षिण एसियाली खेलकुद ‘साग’ सुरु, महिला फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात
२०७२ माघ २२ शुक्रबार, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद ‘साग’को १२ औं संस्करण सुरु भएको छ । दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र सहभागि प्रतियोगिताको भारतीय प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदीले शुक्रबार उद्घाटन गरे । गुवाहाटीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा प्रधानमन्त्री मोदीले औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । सिलोङमा पहिलो दिन खेल भएको छ । यद्यपि, सिलोङमा खेलको विधिवत सुरुवात शनिबार हुने बताइएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न २३ खेलहरु समावेश छन् । नेपाल, भारत र श्र ... बाँकी अंश»
यू–१९ विश्वकप क्वार्टरफाइन : नेपाल बंगलादेशसंग ६ विकेटले पराजित
२०७२ माघ २२ शुक्रबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी अण्डर–१९ विश्वकप क्रिकेटको क्वार्टरफाइनलमा नेपाल पराजित भएको छ । १५ वर्षपछी क्वार्टरफाइनलमा पुगेको नेपाल टेष्ट मान्यता प्राप्त बंगलादेशसंग ६ विकेटले पराजित भएको हो । २ सय १२ रनको मध्यम चुनौती पछ्याएको बंगलादेशले ४८ ओभर २ बलमा ४ विकेट पुमाएर पुरा गरेको हो । बंगलादेशका लागि कप्तान मेहेदी सहसन मिराज र विकेट किपर जाकिर हसनले उत्कृष्ठ पारी खेले । जाकिरले अविजित ७५ रन बनाए भने मेहेदीले ५५ रनको योगदान दि ... बाँकी अंश»
यू–१९ क्वार्टरफाइनल : बंगलादेशसामु नेपालको २ सय १२ रनको चुनौती
२०७२ माघ २२ शुक्रबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी अण्डर–१९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध मध्यम प्रर्दशन गरेको छ । शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मिरपुरमा जारी क्वार्टरफाइनलमा नेपालले बंगलादेशसामु २ सय १२ रनको रनको चुनौती पेश गरेको छ । नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २ सय ११ रनको योगफल बनायो । बंगलादेश केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्दै छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ राजेको नेपालका लागि कप्तान राजु रिजालले ७२ रन बनाए । यू–१९ विश्वकप क्र ... बाँकी अंश»
यू–१९ क्वार्टरफाइनल : बंगलादेशसामु नेपालको २ सय १२ रनको चुनौती, रोक्ला नेपाल ?
२०७२ माघ २२ शुक्रबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी अण्डर–१९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध मध्यम प्रर्दशन गरेको छ । शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मिरपुरमा जारी क्वार्टरफाइनलमा नेपालले बंगलादेशसामु २ सय १२ रनको रनको चुनौती पेश गरेको छ । नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २ सय ११ रनको योगफल बनायो । बंगलादेश जवाफी गरिरहेको छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ राजेको नेपालका लागि कप्तान राजु रिजालले ७२ रन बनाए । यू–१९ विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेश ... बाँकी अंश»
यू–१९ क्वार्टरफाइनल भिडन्त : बंगलादेशविरुद्ध पहिले व्याटिङमा नेपाल, रच्ला इतिहास ?
२०७२ माघ २२ शुक्रबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी आइसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटको क्वार्टरफाइनलमा नेपालले आयोजक बंगलादेशसंग खेलिरहेको छ । शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मिरपुरमा नेपालले टस जितेर व्याटिङ रोजेको छ । नेपालले बंगलादेशलाई गतिलो चुनौती दिन सके र बलिङमा रोक्न सके जित निकाल्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । समूह ‘ए’ को विजेता बंगलादेश र समूह ‘डी’ को उपविजेता नेपाल दुबै जितको खोजीमा छन् । नेपालले समूह चरणको खेलमा टेष्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र न्यूजिल्याण्डलाई ३२ ... बाँकी अंश»
तेक्वान्दो खेलाडीको विकासका लागि महासङ्घका अध्यक्ष नेपालमा
२०७२ माघ २१ बिहिबार, काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा नेपाल भ्रमणमा रहेका द वल्र्ड तेक्वान्दो फेडरेसनका अध्यक्ष डा चुङवन चोउ सहितको टोलीले शिष्टाचार भेट भएको छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष चोउले नेपालमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका तेक्वान्दो खेलाडी र बालबालिकाको विकासका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले टोली नेपाल भ्रमणमा रहेको जानकारी गराए ।। उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष तेक्वान्दो खेलको सर्वोच्च वेल्ट( ९डन ब्ल्याक बे ... बाँकी अंश»
फुटबलको विश्व वयरितामा नेपालको छलाङ, आठ स्थान माथि उक्लियो
२०७२ माघ २१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघ फिफाको नयाँ बरियतामा नेपाल आठ स्थान माथि उक्लिएको छ । यसअघि नेपाल १ सय ९६औं स्थानमा पुगेको थियो । विहिबार जारी गरेको नयाँ बरियतामा नेपाल दक्षिण एसियाको पाँचौ स्थानमा आएको छ । विश्व बरियतामा नेपाल एक सय ८८औं स्थानमा छ । अघिल्लो महिना भारतको केरलामा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल श्रीलंका र भारतसँग पराजित भएसँगै नेपाल १ सय ९६ औं स्थानमा झरेको थियो । जो नेपाली फुटबल इतिहासको कमजोर वरियता रहेको फुटबल पण्डितहरु बता ... बाँकी अंश»
प्रकाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
२०७२ माघ २१ बिहिबार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रशिक्षक तथा ग्लोवल फिल्म फेस्टीभलका लिडर प्रकाश थापालाई अमेरिकाको सानफ्रान्सिकोमा कम्युनिटी सर्भीस अवार्ड २०१६ बाट सम्मान गरिएको छ । अमेरिकन ईण्डियन पत्रिका सांझी सोच तथा ग्लोवल पञ्जाव टिभी च्यानलको तेस्रो वार्षिकोत्वसको उपलक्ष्यमा कम्युनिटीमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरुलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । यसरी सम्मानित हुनेमा थापा पहिलो व्यक्ति हुन् । साथै ईलेक्टेड स्टेट एसेम्ब्ली मेम्बर ... बाँकी अंश»
सुआरेजको ४ र मेसीको ३ गोलले बार्साको शानदार जित, भ्यालेन्सिया ७–० ले स्तब्ध
२०७२ माघ २१ बिहिबार, एजेन्सी । स्पेनिश किङ्गस कपको रुपमा परिचित कोपा डेल रे फुटबलमा स्टार खेलाडीले भरिएको बार्सिलोनाले भालेन्सियाविरुद्ध शानदार जित निकालेको छ । बार्सिलोनाले भ्यालेन्सियाको पोष्टमा ७ गोल गर्दै शानदार जित हासिल गरेको हो । बुधबार राति बार्साको घरेलु मैदान नउ क्याम्पमा भएको सेमिफाइनल पहिलो लेगको खेलमा बार्सिलोना फराकिलो अन्तरले विजयी भएको भयो । यो जितले बार्साको फाइनल यात्रा बलियो भएको छ । बार्साका लागि फरवार्ड तथा उरुग्वेन स्टार लुइस सुआरेजले चार ग ... बाँकी अंश»